Soomaaliya oo ku sii biiraysa Ciraaq iyo Afgaanistaan.
Soomaalidu markii ay gobannimada qaadatay 1960kii uma diyaarsanayn nidaam dawladnimo inay isku maamulaan, kooxdii xilligaas talada qabatayna waxay isku dayeen inay hannaanka dimoqraadiyadda wax ku wadaan. Waase ku fashilmeen oo dhaqankii qabiilka iyo qabyaaladdii ayaa si xoog leh ugu fiday maamulkii iyo hay’adihii dawladda oo curyaamiyey. Taasoo keentay inay ciidamadii taladii la wareegaan, shacabkiina taageero iyo caleemo qoyan ku soo dhaweeyo.
Haseyeeshee ciidamada qudhoodu inkastoo markii hore lagu diirsaday loona sacabiyey haddana ma ay keenin aragti hannaan dawli ah xanbaarsan oo horseedi karta xasillooni iyo horumar. Ciidamadu inkastoo ay Hanti-wadaag ku dhawaaqeen haddana kama ay nasiib-roonaan kooxdii rayidka ahayd oo iyaga ka horraysey, sidii oo kale ayaana qabiil iyo qabyaaladi ay la degeen, taasoo ay u sii dheerayd madax adayg, waxlayn iyo cabiidin, ilaa la dhaxlay inay holcaaan dagaallo sokeeye oo ay hoggaaminayaan jananno iyo kornaylo qabiilooyin-koodii ka dhigay jabhado hubaysan.
Jabhadaha hubaysani iyaguna ma lahayn aragti siyaasadeed iyo mabaadi’ dawladnimo oo lagu hirto. Waxay ahaayeen qabyaalad qaawan oo qori wadata, ujeedkeeduna yahay inay wax dumiso. Jabhadihii waa ku guulaysteen inay dumiyaan qarankii, dalkiina burburiyaan. Dabadeedna waxay noqdeen qabiilooyin islaynaya oo aan ujeeddo kale lahayn inuu qabiil ka adkaado mid kale mooyee.
Janannadii iyo kornayladiina waxay noqdeen qab-qablayaal dagaal oo uu mid walbaa ku faraxsan yahay inuu qabiilkiisa dagaal geliyo si qabiil kale loo laayo oo looga adkaado. Waxay kaloo noqdeen kuwo sidaas madaxnimada u qaba oo faan iyo ammaan ka dhigta wixii la laayo. Dabadeena taasi arrin looga daydo ayay noqotay oo waxaa hoggaamiyo kooxeedyo dagaalka qabiilka hoggaansha noqday kuwo aan ciidanba soo marin ama magaalaba arki jirin ama dhagaxlayaal ahaa aan war dawladeedba hayn. Kuwaan danbe lagama jid laha maxaayeelay qabiilka iyo qabyaaladda waa yaqaannaan, janannada iyo kornayladuna wax kale ma hayaan.
Waa sidaase, adduun-weynuhu wuxuu isku dayey in soomaaliya loo soo gurmado oo la badbaadiyo, laakiin nasiibdarro bar loo afgarto ayaa la aqoon waayey. Waa dad hal qoys ah oo isdhalay oo dhiig, dhaqan, diin, midab iyo afba hal ka ah. Waana islaynayaan, qab-qablayaashiina waa faraxsan yihiin, sidii ay filin jilayaan bayna u egyihiin. Shirar badan ayaa loo qabtay bal in heshiis la helo, waase ku kala tageen mid walba, maxaayeelay waxay isku waafaqsanaayeen inay filinka sii jilaan oo uusan ka dhammaan.
Waxaa la soo gaarey shirkii ugu danbeeyey ee Kenya (Eldoret, Embigathi).
Qab-qalayaashii waa la isu ururiyey. Meel ayaa lagu wada xereeyey. Hulkii ay galaanba waa laga daba galay. Geedkii ay ku xoqdaanba waa laga saaray. Ugu danbayn hal baarlamaan ayay isla noqdeen, madaxweynana waa iska dhexdoorteen. Ninka la doortay mooyee inta kale waa bidaar sibiq ku gashay. Keligi ayaa markaan filinkii jili kara. Iyaga waa ka xirmay. Quluubtoodu raalli ma aha. Kitaabkii iyo dhaartiina waa ay wada mareen. Danse kama ay galeen ee waxay ahayd fagaare caalamkii u dhan yahay. Waxna waa laga saxiixay. Meel ay ka noqdaan ma joogaan, meel ay joogaanna ma arkaan. Qabiilooyin dagaallamayna waa la ahaa. Laba qabiilo iyo ka badan toonnana lama heshiisiin. Qoryaha ha la wareejiyo iyo hubka ha la dhigo ayuuna hadalku joogaa.
SOOMAALIYA Ciraaq iyo Afgaanistaan miyay ku sii socotaa??????
Taageeradii Mingiste Xayle Maryan uu siin jirey jabhadihii hubaysnaa uma roonayn soomaaliya, maantana ciddii taageerta in xalka Soomaaliya lagu raadsho xabbad iyo qori ma aha cid soomaaliya u roon. Soomaaliya masiibada Ciraaq iyo Afgaanistaan ka jirta, markaan waa ka nabdoon tahay, haddiise xabbad xal looga doono waxay halis u tahay inay labadaas dal xaalkoooda isu rogto oo ku siibato. Sidoo kalena ay noqoto meel soo jiidata xafiiltanka webiga Niil, oo hagardaamooyin badan oo horena ay Soomaalida ka soo gaareen. Beesha caalamka iyo urur goboleedka IGAD ha ka fiirsadeen in Soomaaliya xabbad danbe dib looga bilaabo.